Shina Stripe Tarp orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
Ny PE Stripe Tarp dia vita amin'ny lamba vita amin'ny HDPE misy kofehy samihafa isan-karazany araka ny fangatahan'ny mpanjifa, nanisy loko tamin'ny lafiny roa miaraka amin'ny fitaovana LDPE, hafanana efatra misy tombo-kase mifatotra amin'ny tady PP any amin'ny hem. Grommets aluminium amin'ny elanelam-baravarana manodidina amin'ny zorony efatra Manamafy ny bara plastika.
Ny lamba vita amin'ny hoditra dia vita matevina ary ny kofehy vita amin'ny mahazakan-tsolika matevina dia miantoka ny vokatra vita amin'ny fananganana. Azo ampiasaina koa ny fitsaboana UV. Afaka mamokatra vokatra vita izahay, fa afaka mamokatra horonana vita amin'ny lamba vita ho anao ihany koa.
harato 5x4 ~ 16x16
1. Ny vokatra vita rehetra nofonosina ao anaty kitapo pol an'ny PE miaraka amina mari-pamantarana.
4. Ny horonana vita amin'ny lamba dia azo averina amin'ny alimo vy.
Manaraka: Kamiao tariby